6 U isticmaal khamri cad Cad nadiifinta guriga | Bezzia
6 isticmaal khal khal cad nadiifinta guriga
Khamriga cad waa wax soo saar dabiici ah oo dabiici ah oo loo isticmaali karo nadiifinta guriga ficil ahaan gebi ahaanba. Meel kasta, meel adag, dufan, liin, qoyaan, waxaa lagu nadiifin karaa khal cad, xitaa waa hawo dabiici ah oo dabiici ah. Badeecadani waa sahlan tahay in la helo, qiimo jaban oo bey'adeed u habboon.
Marka, marka aad ogaato dhammaan fursadaha alaabtaan, hubaal waad dwaad joojin doontaa inaad iibsato noocyada kala duwan ee nadiifiyeyaasha gaarka ah gees kasta oo ka mid ah gurigaaga. Hal shey ayaad ku nadiifin kartaa oo ku nadiifin kartaa gurigaaga oo dhan, si aad u keydiso lacag badan iyo boos. Ma iloobi karo in alaabta nadiifinta ay ku jiraan kiimikooyin khatar u ah carruurta, xayawaanka rabaayadda ah iyo bey'adda.
1 Ma rabtaa inaad ogaato maxay yihiin isticmaalka khamriga cad?
1.1 Bakteeriyada ujeedo badan leh
1.2 Si looga takhaluso liinta
1.3 Nadiifiyaha tuubooyinka
1.4 Nadiifiye qalabka
1.5 Dharka jilciya dharka iyo bakteeriyada
1.6 Miraha iyo khudradda jeermiska dilaa
Ma rabtaa inaad ogaato maxay yihiin isticmaalka khamriga cad?
Waxaa jira noocyo kala duwan oo khal ah, in kasta oo mid keliya ansax ku yahay nadiifinta. Waa khalka gaarka ah ee cad ee nadiifinta, sidaas darteed waxaa lagu faahfaahiyay weelka, iyadoon loo eegin shirkadda soo saareysa. Noocan khalka ah wuxuu leeyahay heer sare oo aashitada ah, markaa kuma haboona in la isticmaalo, laakiin waxay ku habboon tahay nadiifinta. Haddaba, aan aragno maxay yihiin isticmaalka khamriga cad ee nadiifinta guriga.
Bakteeriyada ujeedo badan leh
Khamriga cad waa jeermi-dile dabiici ah oo dabiici ah, oo awood u leh inuu baabi'iyo caaryada ku faafaya geesaha badan ee guriga, bakteeriyada iyo dhammaan noocyada noolaha ee keena urta xun ee guriga. Waad u adeegsan kartaa nadiifi dusha sare, dhammaan noocyada dabaqyada, musqulaha ee musqusha, dusiyeyaasha, qalabka ama muraayadda, iyo waxyaabo kale oo badan oo la isticmaalo.
Meelaha guud, waad awoodaa ku abuuri waxyaabo badan qaababkan fudud.
In lagu buufiyo buufinta: koob ah khal cad, casiirka liin-biyoodka oo weelka intiisa kale biyo ku dabool. Si fiican u rux kahor intaadan isticmaalin, waxaad u isticmaali kartaa ujeedadan badan ee musqulaha, alaabta guriga ama miiska jikada. Haddii aad ku darto dabool saabuunta saabuunta ee isku dar ah, waxaad heli doontaa masax aad u fiican.
Si looga takhaluso liinta
Wasakhda nuuradda cad ee dhibta leh dusha sare ee ay biyuhu ku yaalliin, sida qasabadda ama shaashadda qubeyska, ayaa qof walwal waali doonta. Kaliya waa inaad ku buufi khalka nadiifinta nadiifinta dusha sare si loo daweeyoWaxay kuxirantahay xaddiga lime ee gundhigga ah, waa inaad isticmaashaa wax kabadan ama kayar. U oggolow khalku inuu wax yar sameeyo oo ku nadiifi biyo kulul.
Bullaacadaha waa guri ku habboon bakteeriyada, oo si xawli ah u tarmaya, ugana tagaya urta qolalka. Isku day khiyaanadan, intaad xirto bulaacadaha waxaad ka takhalusi doontaa urta xun. Ku shub koob biyo ah oo soodhaha ah godka bullaacadda, ka dibna ku dar koob oo khal khal ah, u ogolow in ay wax ka qabtaan muddo 20 daqiiqo ah oo ay dhammaystiraan ku shubista 2 litir oo biyo kulul ah.
Ma jiro wax ka saaraya dufanka oo ka xoog badan khalka cad. Wixii microwave ama foornada, geli koob ah khal khal leh qayb ka mid ah soodhaha, si fiican u kululee oo u ogolow inuu ku shaqeeyo gudaha qalabka 20 daqiiqo. Dufanku wuxuu ku yimaadaa fudeyd la yaab leh. Ha moogaan tan tallaabo tallaabo u nadiifi mashiinka dharka lagu dhaqo si fiican ula nadiifiyahan dabiiciga ah ee cajiibka ah.
Dharka jilciya dharka iyo bakteeriyada
Haddii aad leedahay shaati-dhidid, dhar adag oo nadiif ah, ama dharkaaga oo ka soo baxa mashiinka dharka lagu dhaqo isagoo uraya, isku day khiyaanadan. Kudar rubuc koob oo khal khal cad ah khaanadda dhaqeeysa, farqiga u dhigma jilicsanaanta. Isku day inaad dharkaaga sudho qorraxda maadaama ay iyaduna tahay jeermis dabiici ah oo markii aad qallajiso dharkaaga, urta khalka ayaa gabi ahaanba baaba'aya.
Miraha iyo khudradda jeermiska dilaa
Kahor intaadan cunin wax miro ah ama khudrad ah, waa inaad wakhti ku qaadataa nadiifinta kahor. Tani waa lagama maarmaan si loo baabi'iyo sunta cayayaanka iyo bakteeriyada ku dhex qarsoon cuntooyinkan. Baaquli ku buuxi biyo, ku dar qaado qaado oo khal khal ah iyo mid kale oo ah bicarbonate. Soo bandhig cuntada kuna maydh xalkan kahor intaadan keydin, sidaa darteed waxay diyaar u noqon doontaa in la isticmaalo.
Ma ogeyd dhammaan adeegsiga adeegsiga khalka nadiifinta cad? Haddii aad taqaanno tabaha kale, la wadaag si aan dhammaanteen u wada karno nadaafadda ugu hagaaji gurigeenna hab deegaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » 6 isticmaal khal khal cad nadiifinta guriga
Kettlebell, waxaad u baahan tahay inaad lumiso miisaanka si joogto ah
Fungus Ciddiyaha: Daawee sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah!